Home Wararka Wafdi ka socda Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika oo Muqdisho...
Wafdi ka socda Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika oo Muqdisho ku soo beegan
Wafdi ka socda Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika oo Muqdisho ku soo beegan.
Waxaa la filayaa in todobaadkan in Muqdisho soo gaaro wafdi ka socda Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika.
Wafdigan uu hoggaaminayo guddoomiyaha bishan November ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika, iyaga kusoo aadan 8-10-ka November 2021-ka.
Wararka ayaa sheegaya in ay golaha la kulmidoonaan madaxda dowladda, dowlad goboleedyada iyo qeybaha kale ee bulshada oo ay ku jiraan bulshada rayidka ah.
Martiqaad aay u direen ururka Bulshada Rayidka ah ayaa lagu sheegay in aay ka soo qeyb galaan shir ka dhici doona xarunta AMISOM ee ku taal xeyndaabka Xalane.
Lama oga waxa aay ka wada hadli doonaan, balse ma aha mid ka mid ah caadooyinka Diblomaasi in aay la shiraan ururo rayid ah.